Xalalka wax afuufa ee afuufa - Delta Engineering - Hagaaji waxtarkaaga!
Xal u helista wax-afuufayaasha afuufa: mashiinnada soo-saarista iyo baakadaha dhalooyinka caagga ah iyo konteenarrada: baallayaasha, tijaabooyinka daadanaya, ...
Xal u helista wax-afuufayaasha afuufa
Sii akhriso +
Xalalkayaga baakadaha ee warshadaha wax lagu karsado ee dharbaaxo leh waxaa ka mid ah noocyo badan oo jawaanno ah, xirxirayaal saxafiyiin ah, joornaallo & depalletizers, kiiska xirxirayaasha, godadka sii yaraanaya, bakhaarada saxaaradda, xalalka xirmooyinka ee la tuuro…
Ka faa'iideyso waayo-aragnimadeena tayada xakamaynta dhalooyinkaaga caagga ah ama weelasha: baaritaanka daadashada, baaritaanka miisaanka, hoos u dhig qalabka tijaabada ...
Keebayaasha dhalada ah (suun fidsan, silsilad, xarkaha dhinaca), maaraynta pallet, wiishashka wiishashka, haadada wareega
Booqo bandhigyada waddooyinka 2022!
Ma doonaysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan bandhigyadayada wadooyinka ama ma waxaad rabtaa inaad isdiiwaangeliso? Riix halkan si aad noogu soo dirto iimayl!
Sideen kuu caawin karnaa?
Guudmarka alaabada & adeega
Shabakadda & siyaasadda gaarka ah
Xisaabiyaha qiimaha boorsada
Delta Engineering, waxaan in ka badan 25 sano oo khibrad ah ku dhex leenahay xal for wax taaj oo kale dharbaaxo.
Tan iyo aasaaskeenii 1992, waxaan diiradda saareyney baahida macaamiisheena. Si gaar ah, waxaan horumarinaynay a xalal dhameystiran dhibaatooyinka shirkadaha shirkadaha la kulma.
Si loo muujiyo, khadkayaga wax soo saarka waxaa ka mid ah palletizers iyo depalletizers, xirxirayaasha saxaarada, qalabka xakamaynta tayada sida tijaabooyinka daadinta ama miisaanka baarayaasha, boorsooyinka, godadka sii yaraanaya, kireystayaasha kiisaska, xalalka xirmooyinka ee lagu rido, aaladaha silo, bakhaarada saxaarada, nidaamyada qaadista, mashiinada goynta, gawaarida , miisaska qaboojinta iyo keydka, miisaska dejinta, dhalooyinka qaada, leekiyeyaasha haadka, wiishashka dhalada, ilaaliyaasha khadka, qabtayaasha codsadayaasha, dahaarka plasma…
Marka la soo koobo, mashiinno kala duwan iyo xalalka loogu talagalay soosaarka iyo baakadaha dhalooyinka caagga ah iyo konteenarada!
Intaas waxaa sii dheer, hadafkeenu waa:
Ilaa tan, waxaan soo saareynaa soona saari karnaa xalal hagaajinaya howlaha wax soo saar ee macaamiisheena, anagoo yareyneyna shaqada gacanta, baakadaha wax lagu raaco iyo kharashka gaadiidka.
Thanks to habkan, Delta Engineering wuxuu noqday mid ka mid ah shirkadaha keena shirkadaha xalalka otomaatiga warshadaha wax taaj oo kale dharbaaxo.
Guusheena waxay ku saleysan tahay xalal balaaran oo balaaran oo si wanaagsan looga fikiray.
Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale sharxi kara shaqaalaheena aqoonta leh, daacadnimadooda iyo sidaas darteed uruurinta waayo-aragnimo, kaasoo si weyn ugu faa'iideysta macaamiisheenna.
Qodob kale ayaa ah hal-abuurnimo. Hal-abuurnimadeennu waxay muujinayaan heerarka sare ee aan nafteena u dejinay suuq ahaan iyo hoggaamiye hal-abuur ku ah wax-u-dhimista wax soo saarka warshadaha.
Iyo, ugu dambayntii laakiin uguyaraan, waxaan uga mahadcelinaynaa koritaankeenna waddo joogto ah oo lagu hagaajinayo kuweenna adeegga xitaa intaa dheer: waxaan ku dadaalnaa rakibo aad u fiican iyo taageerada iibka kadib.
Natiijo ahaan, waxaan si gaar ah loogu meeleeyay inaanu ka soo baxno baahida macaamiisheena adduunka oo dhan.